“मेरो रातो गलबन्दी” गीत युट्युब ट्रेन्डिङको नं. ७ मा (भिडियोसहित) | Hindu Khabar
“मेरो रातो गलबन्दी” गीत युट्युब ट्रेन्डिङको नं. ७ मा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, १ माघ । राजु मास्टरकी श्रीमती कलाकार सपना घिमिरे पौडेलको स्वरमा रहेको गीत “मेरो रातो गलबन्दी” ले यति बेला चर्चा बटुल्दै गएको छ । गीत एसथ्रीके इन्टरटेनमेन्टको अफिसियल युटुब मार्फत केहिदिन अगाडी बजारमा आएको हो ।
अहिले यो गितको निकै नै चौतर्फी चर्चा चलेको छ । गीत बजारमा आएसँगै स्रोता दर्शकले निकै नै रुचाएका छन् । अहिले यो गीत यूटुवको ट्रेन्डिङ नम्बर ७ मा आएको छ ।
गीतमा पौैडेल र नेपाल आइडलबाट लोकप्रियता कमाएका गायक प्रताप दासको स्वर रहेको छ । उक्त गीतमा शब्द तथा संगीत शृजना पनि गायिका सपना कै रहेको छ भने अहिलेका लोकप्रिय संगीतकार सुदिप सागरको संगीत समायोजन रहेको छ ।
गीतमा कलाकार हास्य कलाकार सक्कीगोनिका सागर लम्साल बले र टिकटकमा भाईरल दुई सुन्दरी दिदी बहिनी समारिका र स्मारिका दाहालको अभिनय रहेको छ । साथै हल्का रमाइलोका राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छीको अभिनय पनि रहेको छ ।
सुबहानी युवा क्लब चिदिकाको आयोजनामा वृहत् क्रिकेट खेलको आयोजना
“मया मारीछौ मायालु” बोलको गीत बजारमा
अर्घाखाँचीका गायक खनालको लोक दोहोरी भाका बजारमा
सिंहदरबारकै झल्को आउने मालारानी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन
अर्जुन भुसाल र मेनुका परिवारको आवाजमा दशैं विशेष गित “ए प्रदेशी मुग्लानी” बजारमा भिडियोसहित